Ny mombamomba ny mpanoratra sary: ​​inona ny isotopies? Ahoana no ahitanao ny fombanao manokana? | Famoronana an-tserasera
Ny mombamomba ny mpanoratra sary: ​​inona ny isotopies? Ahoana no ahitanao ny fombanao manokana?
Ny iray amin'ireo adihevitra manahirana indrindra amin'ny tontolon'ny famoronana dia ny famoronana sy ny fametrahana tombo-kase tena izy sy ny tany am-boalohany izay mampiavaka antsika amin'ny mpamorona hafa. SAINGY ny mombamomba ny mpanoratra tsirairay dia voalamina rehefa mandeha ny fotoana, ny fomba ampiasaintsika dia manana lanja lehibe ary raha ny marina dia manana tombo-kase tokana sy mampiavaka azy dia iray amin'ireo tanjona izay ananantsika rehetra izay manolo-tena ho an'ny tontolon'ny sary satria midika izany fa nahita ny tranokalanay izahay, mipetraka izahay ary manana lahasa asa voafaritra ary zavatra mihoatra ny lasa, nahita fantsona mahomby hanehoana ny tenanay izahay.
Mikasika izany dia te hiresaka momba ny isotopy aho anio, izay ireo marika manokana izay manondro ny mpamorona ny sanganasa iray. Ny fiasan'ireo marika ireo ao anaty lahateny iray dia ny mifehy ny lahatsoratray maso ka mamorona karazana firindrana, fikorianana izay manome dikany sasantsasany amin'ireo lahatsoratra novolavolain'ny mpanoratra tsirairay ary manome ambadika dikany hafa. Amin'izany no ahazoan'ny mpanoratra fahalalahana, fahaleovan-tena ary fananana be. Ny dikan'ny tanamasoandro ho toy ny marika ao anatin'ny asan'i Van Gogh, ohatra, dia tsy midika hoe mitovy amin'ny voninkazo maintso izay hita ao anatin'ny asan'ny mpanao hosodoko na mpanakanto hafa, ary izany dia vokatry ny fananganana sary na universes tsy miankina sy feno.
Ity singa ity dia mifamatotra tanteraka amin'ny fotoanan'ny postmodernisme izay misy ifandraisany amin'ny foto-kevitry ny mpanoratra ihany koa. Ny hajia iray an'ny mpanoratra mahaleo tena sy ny fivavahana izay noforonina manodidina ny endrik'ilay mpanoratra nandritra ny taona maro dia misy ifandraisany amin'ny fisian'ny sekoly kanto sy ny avant-garde. Nanomboka teo, ny firaketana, ny fomba famoronana sy ny toetra mampiavaka azy dia nanjary fitaovana ampiasain'ny olona hamorona azy sy ny lanjan'ilay fahitana mandika tanteraka azy ary ny tsimokaritry ny fahatapahany manokana miaraka amin'ireo zavakanto zavakanto. .
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny mpanoratra, dia ilaina ny famakafakana fampitahana ny sangan'asany nandritra ny asany. Io fomba io no ahafahantsika mahazo taratra mahatoky ny fivoaran'ny mpanakanto sy ny sanganasany, ary amin'ny fomba mitovy amin'izany no ahafahantsika manao azy amin'ny asantsika manokana. Ho anay, ireo marika manan-danja sy amantarana (amin'ny Van Gogh ny iray amin'izy ireo dia ny tanamasoandro, fa raha ny anao kosa dia mety hafa) izay maneho tsara indrindra ny fahitanay dia afaka manova ny dikany ary mahazo nuansa vaovao amin'ny fandehan'ny fotoana. Zava-dehibe sy mahaliana tokoa ity. Ny fitenin'ny mpanakanto dia tokony ho mavitrika ary hiova rehefa mandeha ny fotoana satria famantarana ny fivoarana sy ny harena izany.
Mpanoratra maro no namaritra ny isotopy na mari-pamantarana miaro ny zon'ny mpamorona mifototra amin'ny karazana toetra maromaro:
Miorina amin'ny tolo-kevitra hisolo ny hafa na mifanohitra amin'ny mahazatra amin'ny maody fandraisana.
Natao hanolorana, amin'ny ankamaroan'ny tranga, fomba fijery manokana sy akaiky amin'ny alàlan'ny fanatonana ireo fomba fisolo tena manokana, ary omena lanja lehibe ny fomba famoronana fanandramana.
Mba hilazana ny fihetsiky ny mpanoratra manokana dia matetika izy ireo manolotra fandikan-dalàna amin'ireo kanôna napetraka ao anatin'ny fikajiana kanto tamin'ny vanim-potoana iray.
Ity dia olana iray izay misy resabe niokleary amin'ny tontolon'ny famoronana. Ahoana no ahitan'ny mpanakanto ny mombamomba azy sy ny tombokavatany? Ahoana no amelabelarana ny fizotry ny famoronana mba hifandraisan'ny tsirairay amin'ny sanganasa tsirairay sy ny ankizy tsy azo lavina avy amin'ny mpanoratra ny tenany? Ilaina tokoa ny vaky satria fambara iray izay nahitan'ny mpamorona mijery ao anatiny ka hatrany amin'ny fihoarana ireo kanônika natsangana tamin'ny fomba rafitra ao amin'ny fiarahamonintsika. Amin'izany fomba izany dia nahavita nifanaraka tamin'ny fametraham-pomba ivelany izy tamin'ny fizotran'ny fahitana indray ny revolisiona sy ny fanehoana endrika manokana sy zavakanto.
Tsy misy raikipohy hahitana ny valiny, ary tsy misy fomba fahandro ody hamadika antsika ho olo-malaza mivaingana sy mahaleo tena, fa amin'ny ampahany kosa misy ny majika amin'ny fizotran'ny famoronana iray manontolo: samy mahita ny endriny sy ny fizotrany ary ny teknikan'izy ireo ny tsirairay. hahomby amin'ny fanatanterahana amin'ny fomba mahomby ny tontolo anaty ho lasa zavatra ivelany izay misy fiampangana manerantany sy azo ekena eo imason'ny mpahita. Rehefa dinihina tokoa, izay ataon'ny mpanakanto amin'ny fomba iray dia reDiscovery ao anatiny mba hanolotra an'izao tontolo izao andriamby ary ambonin'izay atiny voalohany, izay tsy vitan'ny artista irery ihany no afaka mamolavola, mamorona ary mampiseho azy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny mombamomba ny mpanoratra sary: ​​inona ny isotopies? Ahoana no ahitanao ny fombanao manokana?